Ny mpandeha rehetra mandeha any amin'ny firenena, mila mitady vaovao momba ny trano fandraisam-bahiny, ary i Chili dia tsy misy fihevitra amin'io lafiny io. Misy olona te hahita safidy amin'ny vidiny lafo, mila olona iray trano fandraisam-bahiny manana toerana tsara sy serivisy, ary olona iray dia lafiny manan-danja gastronomic. Any Chili, misy hotely variana ho an'ny tsiron-tsakafo sy kitapo rehetra, ireo mpizaha tany dia afaka mifidy sy trano fandraisam-bahiny mahafinaritra, ary safidy maro kokoa.
Ny trano fandraisam-bahiny dimy kintana faran'izay tsara indrindra, izay manamarika ny amboaram-peo mahavariana sy ny tolotra avo lenta, dia ireto manaraka ireto:
Le Reve dia misy vato 3 avy ao amin'ny fiantsonan'ny Los Leones. Manana fivoahana hafakely sy trano fandroana izy io, ny endri-javatra mahavariana dia trano fidiovana mahatalanjona. Ny sakafo maraina kontinental dia manompo isan'andro ao anaty croissants. Amin'ny fahavaratra, ny vahiny dia afaka miala sasatra sy manandrana sakafo matsiro ao an-tokotany, izay ahitan'ny hazo fihinam-boa tsara.
W Santiago . Ny endri-javatra manokana amin'ny hotely dia ny dobo filomanosana, izay eny amin'ny tafo. Ny vahiny dia afaka miala sasatra ihany koa ao amin'ny spa ary mitsidika ny efitrano fandroana.
Crowne Plaza Santiago - miorina amin'ny Liberty Avenue Bernardo O'Higgins. Ny mpitsidika dia afaka mitsidika ny saha amin'ny saha, ny dobo filomanosana, ny tobim-pahasalamana, ny trano fisotroana. Ny trano fisakafoanana dia manolotra safidy ny sakafo avy amin'ny sakafo Shiliana sy iraisam-pirenena.
Plaza San Francisco dia trano fandraisam-bahiny tsara indrindra eo anelanelan'ny 1 km miala ny La Moneda . Ny vahiny dia manana fahafahana manokana hiasa amin'ny fomba fitsangatsanganana ara-pahasalamana sy ara-batana ao anatin'ilay toeram-pandehanana mahafinaritra. Afaka milomano ao anaty dobo filomanosana ianao, mialà ao amin'ny efitrano fatoriana ary mitsidiha ny efitrano fialan-tsasatra.
4 Star hotely
Tolotra tsara dia tsara ho an'ny vahiny sy trano fandraisam-bahiny efatra ao Santiago , izay ahitana ireto manaraka ireto:
RQ Santiago - dia mirefy 22 km miala ny seranam-piaramanidina . Ny trano fandraisam-bahiny dia miorina amin'ny trano avo, ka ny sakafo maraina dia manompo ao amin'ny efitrano faha-20, izay ahafahana mampifandray sakafo amin'ny fandinihana ireo hatsarana manodidina.
Diego de Velazquez dia mandeha an-tongotra roa minitra avy any amin'ny làlana Calle Suetzia. Ny hotely dia malaza amin'ny restaurant Olivas, izay manome sakafo isan-karazany eo an-toerana. Ny trano nasiana toeram-pitsaboana sy trano fivarotana an-tsena novokarina.
Novotel Santiago - 3 km miala ny Lapan'i Casa Piedra, avy eny amin'ny seranam-piaramanidina afaka miditra ao anatin'ny 15 minitra. Misy dobo filomanosana anaty lakana, spa, thermae ary toeram-pitsaboana.
Manquehue - dia miorina amin'ny toerana mahari-po , 30 minitra avy eo amin'ny Palacio de la Moneda. Ny endriky ny hotely dia ny fisian'ny zaridaina manana toeram-pambolena izay misy ny dobo filomanosana. Eto dia afaka mandeha eny amin'ny lalana maro ianao ary mankafy ny toerana tsara tarehy manodidina.
Trano 3 kintana ao Santiago
Ireo mpikaroka izay mikaroka safidy hividianana teti-bola hijanonana dia afaka mijanona ao amin'ny iray amin'ireo trano telo kintana, ohatra, ireto manaraka ireto:
RQ Dacarlo - toerana tsara toerana, 20 minitra miala amin'ny seranam-piaramanidina. Ny tombontsoa azo avy amin'ilay hotely dia ahitana ny sakafo maraina swedika maimaim-poana, izay isaina isa-maraina.
Quito - latsaky ny folo minitra miala ny Havoan'i Saint Lucia. Avy ao amin'ny hotely dia tsara ny manintona ny atidoha eo an-toerana, ohatra, mankany amin'ny Theater Ministère de Santiago, ny lapa ao La Moneda . Ny sakafo maraina eto antoerana dia manompo isaky ny maraina ao amin'ny kafe tsara tarehy.
Ny hotely Hotel Lyon dia miorina ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Santiago Providencia . Tsara toerana avy amin'ny Metro izy io, misy metro roa metro - Pedro de Valdivia sy Los Leones.
Majestic City Center - miorina ao afovoan-tanànan'i Santiago. Ny hotely dia manana dobo filomanosana, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana tsara tarehy.
Hotely kintana 2 kintana ao Santiago
Ny safidy manankarena indrindra dia hotely izay an'ny sokajy misy kintana 2, anisan'izany ireto:
H-Boutique Tren Del Sur Santiago - miorina ao amin'ny foiben-toerana manan-tantara ao Santiago. Nearby dia ny Trano Mena, Bellavista, Faritra Farany Farany ary ny Museum of Visual Arts.
Hostal Rio Amazonas dia 1 km miala ny afovoan'i Santiago . Toerana hita toy ny Tendrombohitra Santa Lucia, katedralin'ny metropolita .
Hostal de la Barra dia ao amin'ny distrika manan-tantara ao Santiago. Ny vidiny dia ahitana sakafo maimaim-poana. Ny trano fisakafoanana dia manome sakafo an-dranomasina.
La Casa Roja Hostel - miorina eo akaikin'ny metro , manakaiky ny kianja toy ny Plaza de Armas , La Moneda ary ny trano vaovaon'ny Kongresy nasionaly taloha. Ao amin'ny faritany dia misy dobo filomanosana, kianja fitsangatsanganana.
Sandals amin'ny 2017 - amin'ny lamaody sy ny zavatra vaovao amin'ity fahavaratra ity
Akanjo lava sy lamban-jaza
Tranom-bokatra tsy misy manga
Sakafom-pandehan'ny ankizy amin'ny ririnina
Loko mody 2016
22 hevitra manatrika mpianatra rehefa mivezivezy any amin'ny tanàna hafa
Mamy amin'ny mofo vita amin'ny mofomamy
Ny zava-pisotro misy alikaola bevohoka dia avo 10 heny
Fiainana manokana an'ny Dakota Johnson
Freddie Mercury dia nahazo asteridy "voasoratra"
Honey tantely - toetra mahasoa sy fanoherana
Gwyneth Paltrow dia manolotra hanampy an'i Brad Pitt sy Angelina Jolie handalo fisaraham-panambadiana